Samuil Yakovlevich Marshak - sibalo isiko Soviet, umhumushi, imbongi, wemidlalo nomlobi i izingane oluvelele laziwe.
SY Marshak "Poodle": uhlelo lokuqala
Isebenza izingane S. Ya Marshaka akunakubangelwa izinhlobo ezahlukene:. Ingoma, Counting, nezimfumbe, izinkondlo, amazwi kanye nabanye. inkondlo Marshak sika "Poodle" lokuqala ezibhalelwe endlini ukushicilela "Rainbow" ngo-1927. Ngo-1928, "sama" ukushicilela ukhipha umkhiqizo, ugcwalisa imifanekiso umbhalo V. Lebedeva.
Lokhu umdwebi abanamakhono futhi kakade abadumile wafika umnyango yezingane we State Publishing House ukuba Marshak ngo-1924 futhi kwaphela iminyaka eminingana wayeyinhloko edition art. Ukusebenza kuma imifanekiso izincwadi zezingane, kuhlanganise "Poodle", V. Lebedev wafuna ukudala ngendlela ecacile futhi ikholisa. Ababili abavelele sibalo kwamasiko wahola umnyango, bobabili babengabantu abahleli bakhe, etemibhalo kwezobuciko. Kamuva, ngo-September 1933, udale Detgiz kokushicilela.
Imifanekiso kuya inkondlo "Poodle"
"Poodle" futhi abanye abamemezeli. Ukuze S. Ya. Marshaka kwakubaluleke umklamo izincwadi zalo. Ngo-1960 incwadi yanyatheliswa kuyi "Umhlaba Wezingane" ngemifanekiso MP Miturich-Klebnikov. Lena enye yezinhlobo ezingu izinhlelo ezigqame ezingavamile "Poodle". S. Ya. Marshak eshicilelwe eziningi imisebenzi yakhe ekuklanyweni M. P. Mituricha. Imifanekiso ezincwadini izingane abaluleke kakhulu. Asiza abafundi abasha ukuze uqonde kangcono ukuthi umkhiqizo futhi balithole. Painting kanye izinkondlo izincwadi izingane atehlukaniseki.
SY Marshak "Poodle": isebenza ukuhlaziywa
Cabanga ngomsebenzi we imbongi edumile ngaphezulu. Inkondlo ngokuvamile kwenziwa izinguquko Samuil Yakovlevich Marshak. "Poodle" futhi ngokuphindaphindiwe ukuhlelwa. Kumfundi wanamuhla yi-version yokugcina kule nkondlo etholakalayo. Azikho imigca ezamehlela yamahlaya isalukazi nge poodle emakethe, nokujaha ikati kanye imigqa lapho inja losita gogo ukhathele ahlanze izingubo. Ngo-edition 1960 ngemifanekiso M. P. Mituricha Ufake inketho ayikashintshi. Kukhona umugqa we inkondlo ekhuluma ukushushuluza Amaqhawe entabeni, okwakuyinto izinhlelo ngaphambili.
"Poodle" utshela indaba isalukazi futhi abanonya inja poodle wakhe. Umkhiqizo siqukethe 18 mavesi, quatrains futhi pyatistishiya. Inkondlo zingahlukaniswa zibe 9 microtia, ngamunye okuyinto oluthatha mavesi amabili. mikrotema Okokuqala Wetfula balingisi umkhiqizo, ngemuva kwalokhu ngamunye subtopic ukuzidela isalukazi namasu wakhe poodle. Ngakho, mikrotema yesibili kanjani poodle kwaba ngo lezitsha ngoqwembe, kanti eyesithathu - I-ubulephero a poodle, ngubani amasonto amabili icashe isalukazi ke sub-isihloko kanjani poodle wazishaya efile, okwesihlanu - of izinhlamvu ezijabulisayo kwi-slide ice. Lesithupha ingxenye libhekisela indlela inja pecked inkukhu, Seven isitshela indaba a poodle-mate, ekhulwini lesishiyagalombili - a izihibe poodle e izindikimba. Owesithoba - lokugcina. Kumayelana emingaki wanikwa leash futhi collar, futhi yokusabela kuya poodle.
imisebenzi ebhaliwe kalula amaqoqo onesigqi. Line cross-imvumelwano. Ngalokhu zafuna SJ Marshak. "Poodle" - omunye wemisebenzi ehunyushwe kakhulu kunazo zonke.
Inkondlo is kahle ibhekwa - ngisho abafundi abasha kulula ukukuqonda esiqintini umsebenzi. amahlaya Khanyisa echaza poodle enza imigilingwane enjengeye ikuvumela ukuba kabusha ufunde le nkondlo ubumnandi.
Indlela ukusika apula ekwindla: izeluleko kusuka Abalimi wazibonela
Umlando e abantu: ukudweba iqhawe kanjani
AOMEI Backupper: Kuyini lokhu incazelo Uhlelo, okuyinto indlela ukususa amazwana